Miyey Arsenal bishaan la soo wareegeysaa Malcom? – Tababare Wenger oo ka hadlay arrimaha suuqa ee Gunners - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Miyey Arsenal bishaan la soo wareegeysaa Malcom? – Tababare Wenger oo ka hadlay arrimaha suuqa ee Gunners
Tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ee Arsene Wenger ayaa xaqiijiyey in kooxdu ay u firfircoon tahay inay suuqa kala iibsiga xiddigaha bishaan Janaayo ciyaartoy kala soo wareegto, laakiin waxa uu soo jeediyey in kooxdiisu aysan weli isku diyaarin inay soo qaadato Weeraryahanka naadiga Bordeaux ee Malcom.
The Gunners ayaa lumin karta Weeraryahankeeda Alexis Sanchez oo ka mid ah xiddigaheeda sare, iyadoo labada kooxood ee Manchester United iyo Manchester City ay diyaar u yihiin inay ku dagaalaan sidii ay u sameyn lahaayeen saxiixa xiddigan xulka qaranka Chile.
Wenger ayaa suuqa ka raadsanaya Weeraryahanka, Malcom ayaana ahaa mid ah magacyada la la xiriirinayey, laakiin tababaraha reer France ayaa hoos u dhigay wararka soo jeedinaya in Arsenal ay wadahadal kula jirto bishaan kooxda Bordeaux si ay uga soo qaadato xiddigaas.
“Malcom waa ciyaaryahan wanaagsan, laakiin waxba ma dhacayaan, inagu waqigan kuma jirno kiiskan” ayuu Wenger u sheegay suxufiyiinta.
Markii la weydiiyey inay sameynayaan wax saxiix ah oo ay wadaan dhaq-dhaqaaq ay ku keensanayaan xiddigo cusub bishaan, Wenger ayaa yiri: “Meesha kama saarayo, waxaan la soo wareegi karnaa difaac, khad dhexe ama weeraryahan.”
“Waan furannahay, waxaan ku jirnaa suuqa, waannu firfircoonnahay, laakiin ma doonayo in aan ku siino wararka aanan xaqiijin karin kaddib, suuqaan kala iibsigu waa mid aad u adag.” ayuu hadalkiisa ku daray tababaraha kooxda Arsenal.
Kooxaha Tottenham Hotspur iyo Manchester United ayaa sidoo kale lagu soo waramayaan inay u dhaqaaqayaan weeraryahankan ka tirsan xiddigaha Brazil ee da’doodu ka hooseyso 23-ka sano ee Malcom, kaasoo lagu qiimeeyo 30 milyan oo gini.